किन कप्म्यूटर स्क्रिनमा धेरै समयसम्म हेर्दा टाउको दुख्छ ? जान्नुहोस्, कारण र बच्ने उपाय – Etajakhabar
किन कप्म्यूटर स्क्रिनमा धेरै समयसम्म हेर्दा टाउको दुख्छ ? जान्नुहोस्, कारण र बच्ने उपाय
ताजा खबर :- आधुनिक समयमा कम्प्यूटर र ल्यापटप मानिसको जिन्दगीको अभिन्न भाग बनेको छ । यसको बिना अब सायद जिन्दगीको कुनै कल्पना गर्न सकिदैन होला । नेट सर्फिंग, ईमेल गर्न, सोशल मीडियाको प्रयोगको लागि र भिडियो गेम्स खेल्नको लागि यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । लगातार कम्प्यूटरको स्क्रिनमा आँखाले हेरेर बस्दा धेरै समस्याबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । अफिसमा दिनभर कम्प्यूटरको नजिक बसिरहनु पर्ने मानिसलाई प्रायजसो आँखा सम्बन्धी समस्या वा टाउको दुख्ने समस्या देखिएको छ ।
किन दुख्छ टाउको ? जब हामी कम्पूटरको स्क्रिनमा लगातार हेरिरहेका हुन्छौँ, यस अवस्थामा हाम्रो मस्तिष्कले स्क्रिनको चित्रलाई हेर्नका लागि आँखाको मसल्सलाई लगातार समायोजित गरिरहन्छ । यस सङ्घर्ष र मेहेनतको कारणले कुनै-कुनै बेला टाउको दुख्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । यसको साथै जुन मानिसहरू कुर्सीमा बसेर कम्पूटरमा काम गर्दछन्, उनीहरूको बस्ने अवस्थाले पनि टाउको दुख्ने कारण हुन्छ । यदी तपाईको बस्ने आसन ठिक छैन भने तपाईको घाँटीको पछाडी दुखाई शुरू हुन्छ । घाँटीको यही दुखाई पछि टाउको दुख्ने कारण बन्छ । कम्प्यूटरबाट निस्कने विद्युत चुम्बकीय तरंग पनि टाउको दुख्ने प्रमुख कारण हो ।
बच्ने उपाय कम्प्यूटरको कारणले टाउको दुख्ने समस्याबाट बँच्नको लागि आफ्नो कम्प्यूटरको ब्राइटनेसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसले आँखालाई थोरै पनि असुविधाजनक हुनुहुँदैन । टेक्स्टको साइज बढाउनाले आँखाले यसलाई पढ्नका लागि धेरै मेहेनत गर्नुपर्दैन । यसबाट पनि टाउको दुख्ने समस्या कम गर्न सकिन्छ । कम्पूटरको स्क्रिनलाई लगातार हेर्नबाट बँच्नु पर्दछ । यसको लागि हरेक २० मिनेट पश्चात् स्क्रिनबाट आँखा हटाउनुहोस् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २४, २०७४ समय: २३:३९:५१